पालिकास्तरीय रनिङ शिल्डको औचित्य - Pradesh Today पालिकास्तरीय रनिङ शिल्डको औचित्य - Pradesh Today
पालिकास्तरीय रनिङ शिल्डको औचित्य
माघ २८, २०७६ जीतसागर जी.एम.
दाङमा खेलकुद विकासको गति तीब्ररूपमा भइरहेको छ । भौतिक संरचनादेखि नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्नतर्फ तीनै तहका सरकार लागिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलको महत्व बढ्न थालेपछि खेलाडीमा पनि नयाँ किसिमको उत्साह थपिन थालेको छ । खेलक्षेत्रमा नै आफूलाई दक्षता हासिल गर्दै लैजानका लागि खेलाडी लागेका छन् ।
यसैक्रममा संघ सरकारको सहयोगमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
प्रतियोगिताले विद्यालयस्तरबाट खेलक्षेत्रमा आकर्षण बढाउन थालेको छ । स्थानीय सरकारले पनि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितालाई सार्थकता दिने काम गरिरहेका छन् ।
प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय सरकारले थालेको प्रयास के कस्तो छ ? प्रदेश टुडेकमो आजको राउण्ड टेबलमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
खेलप्रति अभिभावकको चासो
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नै खेलकुद नगरीको रूपमा विकास भइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद रंगशाला निर्माण भएपनि अहिले खेलाडीमा एक किसिमको नयाँ उत्साह थपिएको छ ।
संघ सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामार्फत पनि नयाँ र दक्ष खेलाडी उत्पादन भइरहेको छ । खेलकुदकोे सम्भावना बढ्दै जाँदा यस्ता प्रतियोगिताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । यस वर्षको नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन भइसकेको छ ।
खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताले झनै खेलाडीमा हौसला थपेको छ ।
पुरस्कारको राशि ठूलो नभएपनि प्रतियोगिताले खेलप्रति रूचि राख्ने आमनागरिकमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । तुलसीपुरमा रहेको विद्यालयको सहयोगमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ । हामीले आर्थिकरूपमा सहयोग गर्ने गरेका छौँ भने विद्यालयले प्राविधिक रूपमा व्यवस्थापन गरी प्रतियोगिता हरेक वर्ष सञ्चालन हुने गरेको छ ।
प्रतियोगितमा वर्षेनी खेलाडी बढ्न थालेको अवस्थामा पनि यसले पनि खेलप्रतिको आकर्षण बढाएको छ । प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्नका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने एक लाख रकममा हामीले थप रकम व्यवस्थापन गर्ने सोंच बनाएका छौँ ।
तुलसीपुरलाई स्पोटर््स सिटीको रूपमा विकास गर्नका लागि खेलाडीमा उत्साह थप्न र रूचि बढाउनका लागि पनि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको दायरालाई ठूलो बनाउने सोंच गरेका छौँ ।
अहिले प्रतियोगितामा सीमित खेलहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यसलाई फराकिलो बनाउनका लागि हामीहरू लागिरहेका छौँ । राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको अलवा हामीले विभिन्न समयमा गर्ने मेयरकप,
वडा अध्यक्ष कपले पनि खेलाडी उत्पादनमा थप सहयोग पुगेको छ । खेलकुदलाई पनि पेशाको रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारले खेलप्रतिको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
विद्यालयस्तरमा नै खेलकुदका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन हुने गरेका कारण पनि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता पनि सरकारको आर्थिक सहयोगमा विद्यालयले नै गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थीमा अध्ययनमा मात्र नभई अन्य बाहिरी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विकास भई खेलकुदप्रति रूचि बढ्न थालेको छ । खेलकुदका भौतिक संरचना पनि उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा केही बनिसकेका छन्,
केही निर्माणको क्रममा छन्, यसले पनि खेलाडीमा झनै उत्साह थपिएको छ । यस्ता किसिमका प्रतियोगिताले नयाँ खेलाडी उत्पादन भएर जिल्ला हुँदै राष्ट्रियस्तरमा हुने विभिन्न प्रतियोगितमा तुलसीपुरका खेलाडीहरूले पनि विभिन्न स्थान हासिल गर्ने गरिरहेका छन् । यस कारणले गर्दा पनि यस्तो किसिमको प्रतियोगिताले थप हौसला प्रदान गरिरहेको छ ।
विद्यालयस्तरमै विद्यार्थीको खेलप्रतिको रूचि बढाउनका लागि सरकारले हरेक वर्ष प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रतियोगिताले विद्यार्थीमात्र नभई अभिभावकमा पनि आफ्ना बालबालिकालाई खेलाडी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । प्रतियोगितामा फुटबलदेखि भलिवल, कपड्डीलगायतका विभिन्न किसिमका खेल हुने गरेका छन् ।
यसले गर्दा पनि विद्यार्थीमा रूचि अनुसारका खेल खेल्नमा सहयोग पुगेको छ । यस्ता किसिमका प्रतियोगिता बिगतमा हुने गरे पनि दायरा फराकिलो बन्न सकेको थिएन् ।
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रतियोगिता व्यवस्थित बन्दै गएको छ । केन्द्र सरकारसँगै स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
खेलाडीको उत्पादन नगरी खेलकुदको विकास कसरी हुनसक्छ र ? त्यसैले खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि यस्तो किसिमको प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
खेलाडीको उत्पादन हुन थालेपछि खेलकुदका संरचना पनि विकास हुन थालेका छन् । यसले पनि खेलाडीमा थप हौसला थपेको छ ।
खेलकुद राष्ट्रको गौरबको रूपमा त रहेको छ नै स्वास्थ्यका लागि पनि खेलकुदको विकास जरूरी रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
नयाँ खेलाडी उत्पादन
शान्तिनगर गाउँपालिकामा विगतका वर्षदेखि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा खेलाडीको आकर्षण बढाउन हरेक स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि यहाँ रहेका विद्यालयमार्फत प्रतियोगिता हुने गरेको छ । विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन थालेपछि खेलकुदको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ ।
‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता हुने गरेको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न खेलकुदहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीले खेलकुदमा उल्लेखनीय काम गरिरहेका छौँ ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताले पनि विद्यार्थीमा खेलकुदप्रतिको आकर्षण बढाएको छ । राष्ट्रियस्तरमा नै खेलकुदका ठूला प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहदा हामीले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितालाई खेलप्रतिको महत्व बढेको छ । शुरू–शुरूमा खेलप्रति पनि रूचि नदेखाउने प्रचलन रहेको थियो ।
हामीले यस्ता प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न थालेपछि हरेक वर्ष नयाँ खेलाडी उत्पादन हुने गरेका छन् । खेलाडीको उत्पादन गर्न अर्थात् खेलप्रतिको रूचि बढाउन यस्ता किसिमका प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
विद्यालयस्तरबाटै प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुँदा अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिकालाई खेल प्रतियोगितामा सहभागिता गराउने गरेका छन् । गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमार्फत प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
यसवर्ष पनि हामी प्रतियोगिता सञ्चालनको तयारीमा छौँ । गतवर्ष भएको प्रतियोगितामा सहभागी जनाउने खेलाडीले जिल्लास्तरमा राम्रो स्थान हासिल गरेका छन् ।
संघ सरकारले स्थानीयस्तरमा नयाँ खेलाडी उत्पादन तथा पुराना खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ । प्रतियोगिताका लागि हरेक वर्ष संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई एक लाख बजेट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।
बजेट पर्याप्त नभएपछि हामी स्थानीय सरकारले पनि केही अपुग बजेट व्यवस्थापन गरी प्रतियोगितालाई भव्यरूपमा सम्पन्न गर्ने गरेका छौँ ।
प्रतियोगितामा वर्षेनी नयाँ खेलाडीको आगमनसँगै खेलकुदमा आफूलाई दक्ष गराउँदै लगेको अवस्थामा प्रतियोगिताको महत्व झनै बढेको देखिन्छ । गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयमार्फत हुने प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ ।
हामीले सञ्चालन गर्ने गरेको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा छात्राको सहभागिता अझ बढी देखिन्छ । यसले पनि पुरूषको तुलनामा महिलामा अझ बढी खेलप्रतिको रूचि देखिएको छ ।
प्रतियोगितामा शिल्ड हात पार्नकै लागि पनि विद्यार्थीले अरू समयमा पनि खेलकुदका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने गरेका छन् । गाउँपालिमा खेलकुदको विकासका लागि हामीले भौतिक संरचनादेखि नयाँ खेलाडी उत्पादनलाई जोड दिएका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि खेलकुदको भविष्य राम्रो देखिएकाले यस्ता प्रतियोगिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । खेलकुदले शारीरिक रूपमा स्वस्थता बनाउनुका साथै राष्ट्रलाई चिनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
हामीले सम्भव भएसम्म खेलप्रतिको रूचि बढाउनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ र यो प्रतियोगिताले पनि खेलकुदको विकासमा भूमिका खेलेको छ ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत भलिबल, हाइजम्प, लमजम्प, कपड्डीलगायतका खेल हुने गरेका छन् । फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
फुटबलका लागि समय अलिकति बढी लाग्ने भएका कारण पनि बजेट व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने गरेको छ । त्यसैले फुटबल प्रतियोगिता राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।
फुटबल प्रतियोगिताका लागि पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ । खेलाडीको फुटबलप्रति रूचि पनि देखिएको र सम्भावना पनि धेरै रहेका कारण पनि फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु आवश्यक ठानेका छौँ ।
त्यसैले आगामी दिनमा हामीले संघ सरकारबाट प्राप्त बजेट मात्रैमा भरपर्ने भन्दा पनि आफैले बजेट व्यवस्थापन गरी फुटबललगायतका अतिआवश्यक खेलुकुद प्रतियोगिता संचालन गर्ने साेंच बनाएका छौँ ।
विद्यार्थीमा खेलकुदप्रतिको आकर्षण
खेलकुदको विकासका लागि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता पनि एक हो ।
हामीले उपमहानगर–पालिकाभित्र भएका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमार्फत प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ । यसले पनि विद्यार्थीमा खेलप्रतिको रूचि बढेको छ ।
बिगतका वर्षमा विभिन्न नामले सञ्चालन हुने प्रतियोगिता संघीयता कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा स्थानीय सरकार आइसकेपछि प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि झनै सजिलो भएको छ । संघ सरकारले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि एक लाखको बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ तर यो रकम पर्याप्त हुँदैन् ।
हामीले प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न आर्थिकदेखि विभिन्न सहयोग गरेका छौँ ।
युवामा पछिल्लो समय खेलप्रतिको रूचि बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताले झनै आकर्षण बढाएको छ । विषेशगरी विद्यालयतहबाटै विद्यार्थीमा खेलप्रतिको रूचि बढाउनका लागि पनि प्रतियोगिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
अवस्था विगतको जस्तो छैन्, वर्षमा एकपटक खेल प्रतियोगितामा समावेश हुन पाउने । व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै खेलकुदको विकास पनि उल्लेखनीय विकास भइरहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि खेलकुदको विकासका लागि निरन्तर लागिरहेको छ । विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणदेखि खेलाडी उत्पादनमा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताले पनि विद्यालयस्तरबाटै विद्यार्थीमा आकर्षण बढाएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न किसिमका खेल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएकाले पनि सबै खेलकुदको विकास हुन सकेको छ । प्रतियोगितामा भलिबल, कपड्डीलगायतका दर्जन बढी खेलहरू हुने भएकाले पनि सबै खेलको सम्बोधन हुन सकेको छ ।
प्रतियोगितामा हरेक वर्ष खेलाडीको उत्साहजनक सहभागिताले पनि खेलाडीमा खेलप्रतिको आकर्षण बढेको छ । जसले गर्दा यस्ता प्रतियोगिताले जिल्लामा दक्ष खेलाडी उत्पादन हुँदै गएका छन् ।
जिल्लालाई खेलकुदको हबको रूपमा विकास गर्नका लागि पनि यस्ता किसिमका प्रतियोगिता सञ्चालन हुन आवश्यक छ । अहिले हामीले घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि खेलक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गरी विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेका छौँ ।
उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष मेयरकप प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ । उपमहानगरपालिका खेलाडी उत्पादन गर्नतर्फ लागिरहेको छ ।
ठूलो धनराशिका खेलहरू सञ्चालन हुन नसकेपनि स्थानीयस्तरका खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलमा लैजानका लागि यस्ता किसिमका प्रतियोगिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । खेलक्षेत्रको विकासका लागि हामीले अझै धेरै गर्नु छ र पनि भएका प्रयास पनि सानो छैनन् जस्तो लाग्छ ।
विद्यालयस्तरमै खेलकुदका विभिन्न गतिविधि भइरहेको समयमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता भएपछि विद्यार्थीमा खेलको महत्व बढेको देखिन्छ । यसमा हामीले फुटबल खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ ।
फुटबल खेलेका अत्याधिक आवश्यकता देखिएको छ तर बजेटमा केही कठिनाई भएका कारण पनि फुटबल प्रतियोगिता समावेश गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
फुटबल खेल खेलाउँदा समय धेरै लाग्ने भएका कारण पनि बजेट सीमित हुँदा सञ्चालनमा कठिनाई आइरहेको छ । आगामी वर्षमा फुटबल खेल पनि समावेश गराउनका लागि हामीले बजेट व्यवस्थापनदेखि विभिन्न प्राविधिक पाटोलाई व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छौँ ।
अहिले सञ्चालन हुने खेलमा कपड्डीमा बढी रूचि देखिएको छ । विषेशगरी छात्रामा कपड्डीसँगै भलिवल प्रतियोगितामा बढी रूचि देखिएको छ । तर छात्रमा फुटबल खेलप्रति बढी आकर्षण देखिन्छ ।
मागलाई मध्यनजर गरी आगामी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ । स्थानीय सरकारबाट हुनसक्ने सहयोगको दायरालाई फराकिलो बनाएर प्रतियोगितालाई झनै व्यवस्थित साथ सञ्चालन गर्नका लागि योजना बनाएका छौँ । खेलकुदको विकासका लागि हामीलाई विद्यालयले पनि महत्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ ।
खेलको दायरा बढ्दैछ
भविष्यमा देशका लागि उत्कृष्ट एवं सक्षम खेलाडीको आधारशीला तयार गर्ने उद्देश्यले विद्यालय तहमा अहिले राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको छ ।
खेल प्रतिभाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरूप शान्तिनगर गाउँपालिले पनि पालिकाभित्र रहेका विद्यालयमार्फत राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
निर्देशिकामा विद्यालयमा अध्ययनरत १८ वर्षभन्दा मुनिका कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी खेलाडी सहभागिता जनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुरूप नै गाउँपालिकाले प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको छ ।
प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिकामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा विद्यार्थी सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएअनुसार शैक्षिक सत्रको माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १२ सम्म नियमित रूपमा अध्ययन विद्यार्थीले सहभागिता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, गाउँका विद्यार्थी केहिले ढिलो पढ्ने हुन्छन् र २० वर्षका विद्यार्थी पनि खेल्न आउँदा १६/१७ वर्षका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई धेरै मर्का वा अन्याय हुने हुन्छ र प्रतिभा पलायन वा ड्रप आउट हुने बढी सम्भावना हुन्छ । हामीले सकेसम्म व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर नै प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
यस्तो किसिमको प्रतियोगिताले विद्यार्थीले जिल्ला, प्रदेश अनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि जित्ने पुरस्कार थाप्छन् अनि आफ्नो घर वा जिल्लामा जाने हुन्छन् ।
नेपालका कमै स्कुलमा वैज्ञानिक तरिकाले खेलकुद प्रशिक्षण दिएका हुन्छन् । त्यस्ता प्रतिभावान् खेलाडीलाई नियमित रूपमा खेलकुद प्रशिक्षण गराउने व्यवस्थामा ध्यान दिन सकिएको छैन ।
त्यस्ताका लागि पनि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता महत्वपूर्ण मानिएको छ । गाउँपालिका भौगोलिक विकटमा भएका कारण सबै विद्यालयले पालैपालो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न कठिनाई भएपनि हामीले प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएका छौँ ।
भौगोलिक विकटतासँगै खेलकुदको संरचनाको अभावमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको छ । ठूला–ठूला खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसके पनि विभिन्न पक्षलाई मध्यनजर गरी हामीले सकेसम्म धेरै किसिमका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
प्रतियोगितामा कपड्डी, तेक्वान्दो, भलिबल, कराँते, एथ्लेक्टिक, १००, २००, ८००, १५०० मिटरको दौड, रिले लगायतको खेल हुने गरेका छन्् । प्रतियोगितमा गाउँपालिकाभरिका विद्यालयहरूले सहभागिता जनाउने गर्दछन् ।
विद्यार्थीमा खेलक्षेत्रका आकर्षण बढाउन र नयाँ खेलाडी उत्पादन गरी खेलकुदको विकास गर्नका लागि प्रतियोगिता हरेक वर्ष फरक–फरक विद्यालयमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।
बाल दिवस र बालअधिकारका कुरा
गढवामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत
खुल्यो सवारी लाइसेन्स
हेकुली स्वास्थ्य चौकीको सामाजिक परिक्षण